Kuthande Ukufunda IBhayibhile
BAZINIKELA BENGAQHUTYWA MNTU Bazinikela Bengaqhutywa Mntu—EMyanmar
Ufuna Ukwaziwa Nokuthandwa Ngubani?
Ngaba Ujonge KuYehova?
“Ngubani Na OngakuYehova?”
Yiba Novelwano “Kuzo Zonke Iintlobo Zabantu”
Unokwenza Njani Ukuze Ukuthande Ukufunda IBhayibhile?
IMboniselo (Yokufundisa) | Julayi 2018
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI IPidgin yaseSolomon Islands ISepedi ISidama ISilozi ISpanish Isi-Ibanag Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Isoko Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBassa (saseCameroon) IsiBelize Kriol IsiBhulu IsiBicol IsiBoulou IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitonga (SaseZimbabwe) IsiChiyao IsiCibemba IsiCinyanja IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDamara IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDigor IsiDouala IsiEdo IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFiji IsiFinnish IsiFon IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHiri Motu IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKabiye IsiKabuverdianu IsiKannada IsiKikamba IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKurdish Kurmanji (SaseCaucasus) IsiKurdish Kurmanji (sesiCyrillic) IsiKwangali IsiKwanyama IsiLatvia IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMam IsiMambwe-Lungu IsiMarathi IsiMarshallese IsiMbunda IsiMongolia IsiMyanmar IsiNahuatl (saseGuerrero) IsiNahuatl (saseHuasteca) IsiNdebele (saseZimbabwe) IsiNdonga IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPhuthukezi(sasePortugal) IsiPolish IsiPonapea IsiPunjabi IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiSesotho (South Africa) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTajiki IsiTamil IsiTelugu IsiTetun Dili IsiThai IsiTigrinya IsiTiv IsiTojolabal IsiTongan IsiTshayina SaseCanton (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseCanton (Esiqhelekileyo) IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTuvaluan IsiTwi IsiTzeltal IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUrhobo IsiUzbek IsiVietnam IsiWolaita IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu
UYOSHUWA kwakufuneka akhokele amaSirayeli awase kwiLizwe Lesithembiso. Yayiza kuba nzima kakhulu le nto. Kodwa uYehova wamenza waqiniseka ukuba uza kukwazi ukuyenza, waza wamkhuthaza esithi: ‘Yiba nesibindi womelele. Wunyamekele umthetho wam. Uwufunde imini nobusuku, ukuze ukwenze ngenyameko konke oko kubhalwe kuwo. Ngoko uya kuyenza iphumelele indlela yakho wandule ke wenze ngobulumko.—Yosh. 1:7, 8.
Kula ‘maxesha amanqam ekunzima ukujamelana nawo,’ nathi sineengxaki ezinzima. (2 Tim. 3:1) NjengoYoshuwa, singazoyisa ngokulandela icebiso uYehova awamnika lona. Simele siyifunde qho iBhayibhile, size sisebenzise imigaqo yayo xa sivavanywa.
Abanye bethu banokungazi ukuba bafunde njani okanye abakuthandi ukufunda. Kodwa kuba kubalulekile ukufunda iBhayibhile, jonga ibhokisi ethi “ Khawuzame La Macebiso,” ukuze ufumane amacebiso anokwenza ukuthande ukuyifunda ukuze ikuncede.
Umdumisi wathi: “Ndinyathelise kuwo umendo wemiyalelo yakho, kuba ndiyayoliswa nguwo.” (INdu. 119:35) Nawe ungakuvuyela kakhulu ukufunda iLizwi LikaThixo. Xa uqhubeka ulifunda, zininzi izinto oza kuzazi.
Nangona kungafuneki ukhokele isizwe njengoYoshuwa, nawe uneengxaki ezinzima. NjengoYoshuwa, funda uze wenze izinto ezikwiLizwi LikaThixo ukuze zikuncede. Xa usenjenjalo, uza kuphumelela kwaye wenze ngobulumko.
KHAWUZAME LA MACEBISO
Thandaza ngaphambi kokuba ufunde. IBhayibhile ibhalwe nguThixo usomandla ukuze incede wena. Ngoko xa ufunda iBhayibhile, mcele akuncede uyiqonde, ungayilibali into oyifundileyo uze uyisebenzise ebomini bakho.—Ezra 7:10.
Zibuze imibuzo enjengale xa ufunda iBhayibhile okanye iincwadi ezithetha ngayo: ‘Indixelela ntoni le nto ngoYehova? Idibana njani nomyalezo weLizwi lakhe? Ndingayisebenzisa njani le nto ukuze ndincede abanye?’
Cingisisa ngezinto ozifundayo. Khawume okomzuzwana, ucinge. Indenza ndizive njani le nto ndiyifundayo? Kutheni indenza ndizive ngolu hlobo? Indixelela ntoni ngento eyenzeke kum kwixesha elidlulileyo, eyenzekayo ngoku nenokwenzeka kwixesha elizayo? Ndingayisebenzisa njani le migaqo yeBhayibhile namacebiso ayo ebomini bam? (Yobhi 23:5; INdu. 49:3) Khawubone ukuba ungakwazi na ukusicacisa isizathu sokuba uYehova ekhuthaza abantu ukuba bangazenzi ezinye izinto okanye yintoni enokwenzeka xa umntu ezenza ezo zinto.—Dut. 32:28, 29.
Yiba nombono wento ofunda ngayo. Ngokomzekelo, ngaba uyambona uYosefu ethengiswa ngabantakwabo kumaIshmayeli? (Gen. 37:18-28) Yintoni oyibonayo, oyivayo ngeendlebe nangeempumlo? Khawube ngathi ulapho nawe. Yintoni ababeyicinga? Inoba babeziva njani? Xa ucinga ngolu hlobo, izinto ozifundayo zingacaca kutsho kube mnandi ukufunda.
Zisebenzise izixhobo zokuphanda zentlangano. Funda indlela yokusebenzisa izixhobo zokuphanda zolwimi lwakho, ezikwi-intanethi neziprintiweyo. Cela abanye bakuncede ukwazi ukuzisebenzisa kakuhle. Ngokomzekelo, ISikhokelo Sokuphanda SamaNgqina KaYehova singakunceda ufumane iincwadi ezithetha ngaloo mxholo okanye ezicacisa iivesi zeBhayibhile. Sebenzisa Isikhokelo Sokufunda ILizwi LikaThixo esinenkcazelo ngeemaphu, iitshati, imilinganiselo nemali, nezinye izinto.
Cinga ngezinto ezibalulekileyo osandul’ ukuzifunda ukuze ukwazi ukuyikhumbula into obufunda ngayo. Zibalisele abanye. Ngaba ikho into onokuyisebenzisa entsimini? Xa usenza ezi zinto, izinto ozifundileyo ziza kuhlala engqondweni yakho, uncede nabanye ngazo.
IMBONISELO (YOKUFUNDISA) Julayi 2018